Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ad Fadhigeedu Yahay Bariga Africa oo Cambaaraysay Xukuumada Wayaanaha.
Hay’ad Fadhigeedu Yahay Bariga Africa oo Cambaaraysay Xukuumada Wayaanaha.
Posted by Dulmane	/ January 26, 2017
Hay’ad udooda xuquuqda aadamaha oo fadhigeedu yahaya bariga afrika ayaa cambaaraysay falalka fooshaxun ee xukuumada wayaanuhu ay ka dhex wado labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Oromada.
Hay’ada ayaa sheegtay in taliska wayaanuhu uu ku howlan yahay sidii ay colaad wayn uga dhici lahayd xuduuda dheer ee udhaxaysa Ogadenia iyo Ormia halkaas oo hay’adu ay xustay in ay colaadii bilaabadayba.
Afhayeen u hadlay hay’ada xuquuqul insaanka udooda ee bariga Africa ayaa sheegay in taliska wayaanuhu uu colaadan u adeegsaday ciidamada looyaqaano Layu Police ka ee loo carbiyay gumaadka shacabka kuwaas oo bilaabay in uu mid kastaba sitoos ah ugu duulo shacabka dhinaca kale daga.
Hay’ada ayaa xukuumada wayaanaha ugu baaqday in ay si dag dag ah ujoojiso colaada ka hulaaqaysa xuduuda Ogadenia iyo Oromia taas oo hadaba galaafatay nolosha dad badan oo shacab ah.
Sidoo kale hay’ada ayaa labada shacab ee walaalaha ah ee Ogadenia iyo Oromia ugu baaqday in ay ka tigtoonaadaan dabinta ay umaleegayso xukuumada wayaanuhu taas oo doonaysa in ay xuduuda ka abuurto dagaal daba dheer oo lagu hoobto.
Tan iyo intii ay dagaaladu kabilowdeen xuduuda Ogadenia iyo Oromia waxaa kudhintay in kabadan 200 oo qof halka hantida shacabka kaluntayna ay aad ubadantahay iyadoo ay jiraan dadbadan oo labada dhinac ah oo qoxooti ku noqday wadanka intiisa kale.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya oo colaadahan dabada kariixaysa ayay ujeedadeedu tahay in ay isku mashquulaan labada shacab ee ugu neceb jiritaanka xukunka kooxda TPLF kuwaas oo raadinaya xornimo ay dadkoodu kunaaloodaan.